Adora & etc.: လက်ဆောင်သည် မှတ်စု
Posted by Adora etc. at 02:13
ညီလင်းသစ် 21 November 2013 at 04:06
ကျနော်လည်း မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်က စ,လို့ လူစာရင်း လုပ်ပြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ နည်းနည်းချင်း စ,ပြီးစုလေ့ ရှိပါတယ်၊ ညီမ ပြောသလိုပဲ..၊ ဈေးလည်း ရွေးနိုင်သလို ကျန်ခဲ့တာ၊ ဟာခဲ့တာမျိုး မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့...၊း)
အေးချမ်းတဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာ စိတ်ကောင်းစေတနာတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးသယ်လာတဲ့ ညီမကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းပြီးကြိုဆိုကြ မှာပါ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အိမ်ပြန်ခရီး ဖြစ်ပါစေလို့လည်း တပါတည်း ဆုတောင်းလိုက်ပါရဲ့ဗျာ...။း)
Adora etc. 21 November 2013 at 17:18
ကိုညီလင်းရေ ညီမလဲဒီတခေါက်ရှမ်းပြည်ဘက်ကို သွားလည်မှာ။ တောင်ကြီး အင်းလေးဘက်တော့မဟုတ်ဘူး။ လားရှိုး၊ မူဆယ်ဘက်။ ခုတော့ Sgကနေ အကိုတို့မိသားစုနဲ့ ကလောလိုက်လည်မလို့စောင့်နေတယ်။